उपमेयर हराएको सूचना, २१ महिनादेखि कहाँ हराइन् ? – Taja Khawar
उपमेयर हराएको सूचना, २१ महिनादेखि कहाँ हराइन् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ०६, २०७८ समय: ०:४७:२३
काठमाडौं । एक जना उपमेयर हराएको २१ महिना पुगेको छ । गोष्ठीमामा सहभागी हुन भनेर अमेरिका पुगेकी कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर दन्ता नेपाली ९दर्शना० २१ महिनादेखि हराएकी हुन् ।
चार दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा सहभागी हुन भन्दै गएकी उपमेयर ३ महिनासम्म उतै बस्दासम्म खोजी भएको थिएन।
२०७६ माघ ९ गते सुर्खेतमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न नआएपछि उनी अमेरिकाबाट नफर्किएकोबारे हल्ला चल्यो।
स्थानीय सरकारको उपप्रमुखजस्तो जिम्मेवार पदमा जननिर्वाचित व्यक्ति यसरी दुई बर्षसम्म सम्पर्कविहीन हुँदा समेत बर्खास्त गर्न मिल्दैन।
यस्तो विषयमा कानूनी अड्चन नै छ। संविधानमा स्थानीय तहको उपप्रमुखले राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भएमा मात्र पदमुक्त भएको मानिने व्यवस्था छ।
अहिले उपमेयरले गर्ने कामको जिम्मेवारी वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष तिलक न्यौपानेलाई दिइएको छ।
२०७७ फागुन २७ को कार्यपालिका बैठकले उनलाई जिम्मेवारी दिएको छ। न्यायिक समिति, योजना अनुगमन समिति लगायतका विभिन्न सिमितिहरुमा संयोजक उपमेयर वा उपाध्यक्ष हुन्छन्।
न्यौपाने यसअघि पनि न्यायिक समितिको सदस्य थिए। आफू न्यायिक समितिको संयोजक भएयता उजुरी दर्ता नभएको उनले बताए।
न्यौपानेले भने, ‘उपमेयर हुँदा त उजुरी थिए होला, म आएदेखि उजुरीहरु पनि आएका छैनन। मेलमिलाप समितिबाटै समाधान भएर गएका छन्।’
कामको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई दिएपछि कामकाजमा भने खासै असर नपरेको मेयर शाहीले बताए।
उपमेयर गायब भएपनि उनलाई कारबाही गर्ने वा फिर्ता बोलाउने विषयमा मेयर र सम्बन्धित पार्टी नै नाजवाफ रहेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति कालीकोटका सहसचिव दमन शाहीले बताए ।
बारम्बार यसको लागि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराए पनि पार्टी र मेयरको ध्यानाकर्षण नभएको आरोप उनले लगाए।
जननिर्वाचित व्यक्ति जनताको अवहेलना हुनेगरी जिम्मेवारी छोडेर गायब हुनु भनेको नैतिक रुपमा गलत भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
‘कानूनले गायब हुन मिल्ने वा नहुने भनेको छैन, तर जनताले प्रत्यक्ष रुपमा जिताएका जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी छोडेर गायब हुनु भनेको नैतिकता हराउनु हो,’ उनले भने।
अधिवक्ता सापकोटाले गायब भएकी उपमेयरको सेवासुविधा रोक्ने निर्णय नगरसभाले गर्न मिल्ने बताए। नेपालीसँगै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गाना पनि गोष्ठीमा सहभागी हुन गएका थिए।
चार दिने कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका नेपाली र ढुङ्गानाको गोष्ठीसहित २१र२२ दिन बस्ने कार्यक्रम थियो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि दन्ता काठमाडौं गएकी थिइन्। बागबजारको पद्माकन्या क्याम्पसमा बिबिएस पढेकी उनले माओवादीको विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति गरेकी थिइन्।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएर निर्वाचित भएकी थिइन्। मोटिभेटन्यूजबाट
Last Updated on: July 21st, 2021 at 12:47 am
९५५ पटक हेरिएको